Muxuu ka yiri Pep Guardiola guushii ay xalay kooxdiisa Man City ka gaartay Wolverhampton?? – Gool FM
(Manchester) 22 Sebt 2020.Tababaraha kooxda Manchester City ee Pep Guardiola ayaa ka hadlay guushii 3-1 aheyd ay kaga gaareen naadiga Wolverhampton, kulankii xalay ee horyaalka Premier League.
Manchester City ayaa guul ka soo heshay kooxda Wolverhampton oo ay ku booqatay Molineux Stadium, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 1-3, kulan qeyb ka ahaa horyaalka Premier League, waxaana goolasha u kala dhaliyay Kevin De Bruyne, Phil Foden iyo Gabriel Jesus.
Warsidaha “NBC Sports” ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay Pep Guardiola kaddib guushii ay xalay ka gaareen kooxda Wolverhampton, wuxuuna yiri:
“Waa guul wanaagsan, marka loo fiiriyo marxaladdan aan ku jirno iyo xaaladdii aan soo aragnay labadii usbuuc ee la soo dhaafay, waxaan filayay inaan dhibaato la kulmi doono xilliyada qaar, laakiin guud ahaan, shaqo wanaagsan ayaan qabanay”.
“Qeybtii labaad si fiican ayaan u ciyaarnay, waxayna naga caawisay inaan xakameyno kubadda, wax badan ma ordi kareynin sababtoo ah waan daalnayn”.
Pep Guardiola ayaa hadalkiisa ku soo gabagabeeyay hadal la yaab leh ee ku saabsan qiimeynta ciyaarta wuxuuna yiri:
“Kaliya waa ciyaar aan ku guuleysanay 3-1, marka waa inaan u ciyaarnaa si aan u helno 114 dhibcood, hadda waxay noqdeen 111 dhibcood”.